လက်ထပ်ဖို့အတွက် အဆိုးရွားဆုံး အကြောင်းပြချက် ၁၀ မျိုး – Gentleman Magazine
လကျထပျဖို့အတှကျ အဆိုးရှားဆုံး အကွောငျးပွခကျြ ၁၀ မြိုး
လက်ထပ်တာဟာ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် အဆုံးစွန် ချစ်ကြင်နာမှု ပြခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို မတက်လှမ်းမီ သင် ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သင် သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ထပ်တာဟာ ကလေးကစားစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စုံတွဲတွေဟာ လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သဘောတရားတွေကို မလေ့လာပဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဆင်ပြေပြီ ထင်ပြီး လက်ထပ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတာ၊ နောက်ဆုံး ကွဲကြကွာကြအထိ ဖြစ်ကြပါရော။ လက်ထပ်ဖို့အတွက် မှားယွင်းယူဆတတ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁. သူမက ချိုချိုသာသာ မိန်းကလေးဖြစ်လို့ပါ
ချိုသာ ယဉ်ကျေးတဲ့ မိန်းကလေးကို လိုက်ရှာရတာ ခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်။ အဲဒိ ရှားပါးမျိုးစိတ်ထဲကတစ်ယောက်ကို သင်ကံကောင်းပြီး ရည်းစားအဖြစ်ရခဲ့ရင်တော့ ချက်ခြင်း အိမ်ခေါ်ပြီး လက်ထပ်ချင်မှာ မလွဲ ဧကန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်အမူအရာဆိုတာ ဒုတိယနေရာက စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပြီး ထာဝရ လက်တွဲသွားမယ့်သူတွေမှာ အကြိုက်ခြင်း၊ ဝါသနာခြင်း တူဖို့ကို ထိပ်ဆုံးထား စဉ်းစားရမှာပါ။
၂. သင်တို့ ရည်းစားဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ
အချိန်ကြာကြာ တည်တံ့နိုင်ခဲ့တဲ့ ချစ်မေတ္တာကို ကျွန်တော် လေးစားပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Crush ကနေ အရွယ်ရောက်တဲ့ ချစ်မေတ္တာ ဖြစ်လာခဲ့တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်သာ သူမနဲ့ တစ်ဘဝလုံး ကုန်ဆုံးချင်မယ်ဆို ခုချိန်လောက်ဆို (အခမ်းအနားနဲ့ မဟုတ်ပဲ နှစ်ဦးထဲ) စေ့စပ်ပြီး ဖြစ်ရမှာပါ။ အဲလိုမှ မဟုတ်ခဲ့ရင် သင့်မသိစိတ်ထဲမှာ သူမနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး တချို့ ပြသနာလေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
၃. သူငယ်ချင်းတွေတောင် လက်ထပ်နေပြီ
ခုလတ်တလော ကိစ္စတွေကို Popping လုပ်ချင်တာ ပုံမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ထပ်တာဟာ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းအသစ် ဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Popping လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်စုထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲသော လူပျိုဖြစ်ရတာ နည်းနည်းတော့ ကြောင်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက အဆင်မပြေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးထက်တော့ သာပါသေးတယ်။
၄. မိဘတွေကို နှစ်သိမ့်ဖို့
သင့် သတို့သမီးကို မိဘတွေ သဘောတူအောင် လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ကျဖြစ်မယ့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေကို ရှောင်ပြီး ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မိဘစီစဉ်သူကိုပဲ လက်ထပ်တာကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လက်ထပ်ခြင်းမှာ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေက မိဘတွေရဲ့ ဆန္ဒထက် ဦးစားပေးရမှာပါ။ မိဘတွေ သဘောတူပါစေပဲ ဆုတောင်းပါတော့။
၅. ဘဝရဲ့ ခြေလှမ်း နောက်တလှမ်း မို့လို့
ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ လက်ထပ်ခြင်းကို ဘဝရဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်ထားကြပါတယ်။ သင့်မှာ အလုပ်နဲ့ ကားရှိတိုင်း မိန်းမကို နောက်တစ်ဆင့်လို့ မြင်မထားသင့်ပါဘူး။ လက်ထပ်ခြင်းမှာ ပုံသေကားကျ သတ်မှတ်ထားတာ မရှိပဲ လူတိုင်းဟာ ဘဝမှာ လမ်းအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ကြတာပါ။
၆. သူမကို အကြွေးတင်သလို ခံစားနေရလို့
သူမက သင် ဘားတွေမှာ မူးနေတဲ့ ညတွေ၊ ဂိမ်းဆိုင်မှာ အိပ်ခဲ့တဲ့ ညတွေ၊ ပစ်စလတ်ခတ် နေတတ်တာတွေကို သည်းခံခဲ့ ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက သင် သူမကို လက်ထပ်လက်စွပ်တစ်ကွင်းနဲ့ အကြွေးဆပ်သင့်တယ်လို့ ယူဆစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်စိတ်ထဲမှာ၊ နှလုံးသားထဲမှာ မပါပဲ လက်ထပ်လိုက်ရင်အဲဒိ အကြွေး မကြေပါဘူး။
၇. သူမက သင့်ကို ဖိအားပေးနေလို့
သူမက သင့်ကို ပိုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲဖို့ သူမဘဝကို ပေးနေရင်တော့ သင်စဉ်းစားရမှာက သင်ဟာ ပြောင်းလဲချင်ပါသလား ဆိုတာပါပဲ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ၊ ကျောင်းပြန်တက်တယတွေဟာ သင် စိတ်ထဲက မပါရင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါဆိုရင်တော့ သူမ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့ အဆင်မပြေဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
၈. အမှတ်တမဲ့ ပြောထွက်သွားတာ
ဘဝဆိုတာ ခန့်မှန်းမရတဲ့ အချိုးအကွေ့တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ကံကြမ္မာ အထူအဆန်းတစ်ခုကြောင့် သူမက သင့်ကို Propose လုပ်မယ်။ သင်ကလဲ အမှတ်တမဲ့နဲ့ လက်ခံလိုက်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ သံသယ တစ်စုံတစ်ရာရှိရင် အမှတ်တမဲ့ကို အမှတ်တမဲ့ပဲ ထားလိုက်ပါ။ လက်တွေ့ ယူမလာပါနဲ့။
၉. သူမမိသားစုနဲ့ ရင်းနှီးလို့
သင်ဟာ သူမအမေချက်တဲ့ ဟင်းကို ကြိုက်ပါတယ်။ သူမအဖေက သင့်ကို သွန်သင်ဆုံးမပေးပြီး သူမအစ်ကိုက သင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အိပ်ရာပေါ်မှာ တူတူကုန်ဆုံးရမှာက သူမမိသားစု မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုကို အာရုံမစိုက်ပဲ သူမကိုပဲ အာရုံစိုက်ရွေးပါ။ သင် သူမနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ ရာနှုန်း ပိုများပါတယ်။
၁၀. သူမမှာ သင်နဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေလို့
ကလေးတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုကောင်းစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကလေးမှ သူ့ကြောင့် မိဘနှစ်ပါး လက်ထပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကို မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အဖြေတစ်ခုရအောင် နှစ်ယောက်လသေချာ ဆွေးနွေးပါ။ တခြား တစ်ယောက်ပါ ဇာတ်လမ်းထဲ ပါလာရင်တော့ သင့်ကလေးဟာ အခံစားရဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဂရုပြုပါ။
လကျထပျတာဟာ ခဈြသူစုံတှဲတှအေတှကျ အဆုံးစှနျ ခဈြကွငျနာမှု ပွခွငျးပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒိ နောကျဆုံးအဆငျ့ကို မတကျလှမျးမီ သငျ ဘာလုပျနလေဲဆိုတာ သငျ သိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လကျထပျတာဟာ ကလေးကစားစရာ မဟုတျပါဘူး။ စုံတှဲတှဟော လကျထပျခွငျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ သဘောတရားတှကေို မလလေ့ာပဲ သူတို့ကိုယျသူတို့ အဆငျပွပွေီ ထငျပွီး လကျထပျကွပါတယျ။ ပွီးတော့ အိမျထောငျရေးအဆငျမပွတော၊ နောကျဆုံး ကှဲကွကှာကွအထိ ဖွဈကွပါရော။ လကျထပျဖို့အတှကျ မှားယှငျးယူဆတတျတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှေ ရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁. သူမက ခြိုခြိုသာသာ မိနျးကလေးဖွဈလို့ပါ
ခြိုသာ ယဉျကြေးတဲ့ မိနျးကလေးကို လိုကျရှာရတာ ခကျခဲပငျပနျးပါတယျ။ အဲဒိ ရှားပါးမြိုးစိတျထဲကတဈယောကျကို သငျကံကောငျးပွီး ရညျးစားအဖွဈရခဲ့ရငျတော့ ခကျြခွငျး အိမျချေါပွီး လကျထပျခငျြမှာ မလှဲ ဧကနျပါ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျကငျြ့အမူအရာဆိုတာ ဒုတိယနရောက စဉျးစားရမှာဖွဈပွီး ထာဝရ လကျတှဲသှားမယျ့သူတှမှော အကွိုကျခွငျး၊ ဝါသနာခွငျး တူဖို့ကို ထိပျဆုံးထား စဉျးစားရမှာပါ။
၂. သငျတို့ ရညျးစားဖွဈနတော ကွာပါပွီ
အခြိနျကွာကွာ တညျတံ့နိုငျခဲ့တဲ့ ခဈြမတ်ေတာကို ကြှနျတျော လေးစားပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျ Crush ကနေ အရှယျရောကျတဲ့ ခဈြမတ်ေတာ ဖွဈလာခဲ့တာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျသာ သူမနဲ့ တဈဘဝလုံး ကုနျဆုံးခငျြမယျဆို ခုခြိနျလောကျဆို (အခမျးအနားနဲ့ မဟုတျပဲ နှဈဦးထဲ) စစေ့ပျပွီး ဖွဈရမှာပါ။ အဲလိုမှ မဟုတျခဲ့ရငျ သငျ့မသိစိတျထဲမှာ သူမနဲ့ ပါတျသတျပွီး တခြို့ ပွသနာလေးတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။
၃. သူငယျခငျြးတှတေောငျ လကျထပျနပွေီ
ခုလတျတလော ကိစ်စတှကေို Popping လုပျခငျြတာ ပုံမှနျပါ။ ဒါပမေယျ့ လကျထပျတာဟာ အဝတျအစားဒီဇိုငျးအသဈ ဝယျတာမဟုတျပါဘူး။ Popping လုပျရမှာ မဟုတျပါဘူး။ အုပျစုထဲမှာ တဈယောကျထဲသော လူပြိုဖွဈရတာ နညျးနညျးတော့ ကွောငျနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါက အဆငျမပွတေဲ့ အိမျထောငျရေးထကျတော့ သာပါသေးတယျ။
၄. မိဘတှကေို နှဈသိမျ့ဖို့
သငျ့ သတို့သမီးကို မိဘတှေ သဘောတူအောငျ လုပျတာ ကောငျးပါတယျ။ နောကျကဖြွဈမယျ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျမှုတှကေို ရှောငျပွီး ဖွဈသှားတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ မိဘစီစဉျသူကိုပဲ လကျထပျတာကတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ လကျထပျခွငျးမှာ သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေ မိဘတှရေဲ့ ဆန်ဒထကျ ဦးစားပေးရမှာပါ။ မိဘတှေ သဘောတူပါစပေဲ ဆုတောငျးပါတော့။
၅. ဘဝရဲ့ ခွလှေမျး နောကျတလှမျး မို့လို့
ယောကျြားတျောတျောမြားမြားဟာ လကျထပျခွငျးကို ဘဝရဲ့ ခွလှေမျးတဈခုအဖွဈ မွငျထားကွပါတယျ။ သငျ့မှာ အလုပျနဲ့ ကားရှိတိုငျး မိနျးမကို နောကျတဈဆငျ့လို့ မွငျမထားသငျ့ပါဘူး။ လကျထပျခွငျးမှာ ပုံသကေားကြ သတျမှတျထားတာ မရှိပဲ လူတိုငျးဟာ ဘဝမှာ လမျးအမြိုးမြိုးကို ရှေးခယျြကွတာပါ။
၆. သူမကို အကွှေးတငျသလို ခံစားနရေလို့
သူမက သငျ ဘားတှမှော မူးနတေဲ့ ညတှေ၊ ဂိမျးဆိုငျမှာ အိပျခဲ့တဲ့ ညတှေ၊ ပဈစလတျခတျ နတေတျတာတှကေို သညျးခံခဲ့ ပွီးပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါက သငျ သူမကို လကျထပျလကျစှပျတဈကှငျးနဲ့ အကွှေးဆပျသငျ့တယျလို့ ယူဆစရာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့စိတျထဲမှာ၊ နှလုံးသားထဲမှာ မပါပဲ လကျထပျလိုကျရငျအဲဒိ အကွှေး မကွပေါဘူး။
၇. သူမက သငျ့ကို ဖိအားပေးနလေို့
သူမက သငျ့ကို ပိုကောငျးတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲဖို့ သူမဘဝကို ပေးနရေငျတော့ သငျစဉျးစားရမှာက သငျဟာ ပွောငျးလဲခငျြပါသလား ဆိုတာပါပဲ။ ဆေးလိပျဖွတျတာ၊ ကြောငျးပွနျတကျတယတှဟော သငျ စိတျထဲက မပါရငျ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ အဲဒါဆိုရငျတော့ သူမ အနှောငျ့အယှကျဖွဈတဲ့ အဆငျမပွေဲ့ အိမျထောငျရေးတဈခုပဲ အဖတျတငျပါလိမျ့မယျ။
၈. အမှတျတမဲ့ ပွောထှကျသှားတာ
ဘဝဆိုတာ ခနျ့မှနျးမရတဲ့ အခြိုးအကှတှေ့နေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။ ကံကွမ်မာ အထူအဆနျးတဈခုကွောငျ့ သူမက သငျ့ကို Propose လုပျမယျ။ သငျကလဲ အမှတျတမဲ့နဲ့ လကျခံလိုကျမယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့မှာ သံသယ တဈစုံတဈရာရှိရငျ အမှတျတမဲ့ကို အမှတျတမဲ့ပဲ ထားလိုကျပါ။ လကျတှေ့ ယူမလာပါနဲ့။
၉. သူမမိသားစုနဲ့ ရငျးနှီးလို့
သငျဟာ သူမအမခေကျြတဲ့ ဟငျးကို ကွိုကျပါတယျ။ သူမအဖကေ သငျ့ကို သှနျသငျဆုံးမပေးပွီး သူမအဈကိုက သငျရဲ့ သူငယျခငျြးပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ဘဝတဈလြှောကျလုံး အိပျရာပျေါမှာ တူတူကုနျဆုံးရမှာက သူမမိသားစု မဟုတျပါဘူး။ မိသားစုကို အာရုံမစိုကျပဲ သူမကိုပဲ အာရုံစိုကျရှေးပါ။ သငျ သူမနဲ့ အဆငျပွဖေို့ ရာနှုနျး ပိုမြားပါတယျ။
၁၀. သူမမှာ သငျနဲ့ရတဲ့ ကိုယျဝနျ ရှိနလေို့
ကလေးတှဟော အိမျထောငျရေးကို ပိုကောငျးစတော မဟုတျပါဘူး။ ဘယျကလေးမှ သူ့ကွောငျ့ မိဘနှဈပါး လကျထပျလိုကျရတယျဆိုတာကို မဖွဈစခေငျြပါဘူး။ ပိုပွီးကောငျးတဲ့ အဖွတေဈခုရအောငျ နှဈယောကျလသခြော ဆှေးနှေးပါ။ တခွား တဈယောကျပါ ဇာတျလမျးထဲ ပါလာရငျတော့ သငျ့ကလေးဟာ အခံစားရဆုံး ဖွဈမယျဆိုတာ ဂရုပွုပါ။
Previous: သင့်ကို သင့်ကောင်မလေး ပစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၆ ချက်
Next: စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု